कृपया उद्योग शब्दार्ग र एक्रोनिमहरू वर्णन गर्नुहोस् Martech Zone
म मात्र पढ्नुहोस मेरो जस्तो मार्केटिंग टेक्नोलोजी मान्छेहरूलाई लक्षित गर्ने कम्पनीबाट प्रेस विज्ञप्ति। कि प्रेस विज्ञप्ति मा, तिनीहरूले उल्लेख गरे:
OTT, PaaS समाधान, IPTV, AirTies संकर OTT, र OTT भिडियो सेवा प्लेटफार्म, OTT भिडियो सेवा प्लेटफर्म प्रदाता, एक एकीकृत मिडिया प्रबन्धन प्रणाली मार्फत ओभर-द-शीर्ष भिडियो डेलिभरी, OTT को संकर डेमो, डिजिटल भिडियो प्रसारण (dvb-t) , एयरटाइज एयर 7320 XNUMX२० हाइब्रिड सेट-टप बक्स, आईपी मल्टिमेडिया उत्पाद लाइन, सेट-टॉप बक्सहरू जसले दुबै SD र HD भिडियोको लागि एकीकृत OTT समाधान समर्थन गर्दछ।
म यो बनाउदिन। त्यो सबै होइन ... यहाँ अन्तिम बुलेट पोइन्ट छ:
DVB-T / IP हाइब्रिड STBs को एक नयाँ दायरा, एयर 7320 7334२० र 7130 7100, एयर XNUMX१XNUMX०, एक व्यक्तिगत भिडियो रेकर्डि Drive (PVR) STB आन्तरिक हार्ड ड्राइव र नयाँ एयर XNUMX१०० को साथ, मानक परिभाषा कम लागतको STB।
प्रेस विज्ञप्ति पढेपछि मलाई यस कम्पनीले के गर्छ भन्ने बारे कुनै बिल्कुल जानकारी छैन। एउटा संकेत छैन। तिनीहरू आफ्नो उद्योग र आफ्नो प्रविधि मा यति गहिरो इम्बेड छन् कि तिनीहरूले प्रेस विज्ञप्ति पढ्ने जो कोहीले यो के के हो बुझ्नेछन् भनेर सोचे, तिनीहरूले के गरे, बेचे, जुनसुकै…
जब तपाईं तपाईंको ब्लग पोष्ट, ट्वीट्स, प्रेस विज्ञप्ति र वेबसाइट प्रतिलिपि लेख्नुहुन्छ, कृपया उद्योग जर्गाउन वर्णन गर्नुहोस् र तपाईंको परिवर्णी शब्दहरू हिज्जे गर्नुहोस्। हुनसक्छ मैले यस हेँदमा टेक्नोलोजी सम्बन्धी छलफल गरेको भए मैले हेक के हो भनेर बुझेको छु। यसको सट्टामा, मैले यो हेक वास्तवमा के थियो र किन यो महत्त्वपूर्ण थियो भनेर सोच्नको बारेमा लेखें।
टैग: HD भिडियोhdtviPTVशब्दजालottपासpvrsdstb
मार्स 17, 2010 मा 8: 35 एएम
मैले यस समस्याको सामना गरें जब मैले Noobie वेबसाइट शुरू गर्‍यो। आरएसएस जस्तो सामान्य परिवर्णी शब्दको अर्थ के हो भनेर सबैलाई थाहा थियो भनेर म अनुमान गर्न चाहन्न। तर अर्कोतर्फ, म RSS लाई उल्लेख गरेको हरेक पटक मात्र सिम्पली सिन्डिकेसन लेख्न चाहन्न। मेरो समाधान मेरो साइटमा मेरो लेख र ब्लग पोष्टहरूमा प्रयोग हुने प्रत्येक प्राविधिक शब्द परिभाषित गर्दै एक शब्दकोष सिर्जना गर्नु थियो। यस तरीकाले जहिले पनि मैले एक्रोनिम प्रयोग गर्दछु (वा टेकनी शब्द पनि कोही मानिसहरूले नबुझ्न सक्छन्) म यसलाई आफ्नै साइटको ग्लोसरी परिभाषामा लिंक गर्दछु।
मार्स 17, 2010 मा 9: 42 एएम
त्यो कुनै पनि साइटको लागि उत्कृष्ट विचार हो, पेट्रिक! मलाई पक्कै मनपर्दछ कि तपाईं कसरी प्रत्येक शब्दमा लिंक गर्नुहुन्छ!
मार्स 18, 2010 मा 8: 41 एएम
यो किन PR फ्ल्याक्स हो? राम्रो PR फ्ल्याक्स, जे भए पनि? पत्रकारिताको आधारभूत सिद्धान्त बुझ्नु पर्छ। एक प्रेस विज्ञप्तिमा मार्केटिंग विभागको कुराकानी बिन्दुहरू पुनःस्थापित गर्न यो पर्याप्त छैन। उनीहरूले एउटा अखबार रिपोर्टरको रूपमा लेख्नुपर्दछ, सबै महत्त्वपूर्ण जानकारीलाई शीर्षमा राख्नुहोस्, र एक टुक्राको सुरूमा एक्रोनेम र इनिशिलोमेन्टहरू (उदाहरण एफबीआई, सीआईए) बाहिर हिज्जे हुन्छ।
BTW, एक "फ्ल्याक" एक PR प्रैक्टिशनरको लागि अर्ध-अपमानजनक शब्द हो। यो एक प्रकारको कम्प्युटर विशेषज्ञलाई गीक वा एक बेवकूफ कल गर्ने जस्तो छ। गलत हातमा एक डाउन-डाउन हुन सक्छ।